Ma joogaan in ay naftooda la dhamaystiro, waa nafta saaxiibkiisa aadanaha, sida dareemay oo waa in aanay noqon oo aan. Ama meel dareemaan muraaqooda kulan ee ay isku naf, sheeko in dhacaa dareen la ya...
saaxiibkiisa Soul, kaas oo la sheegay in ay ku xiran nafta uga noqdeen nolosha hore, shirka mar kasta ku cel-reincarnation marar badan, ayaa dhisay xiriir dhow. Sidaa darteed, ay u badan tahay in ay l...
Features iyo dhibcood caadiga ah ee naf saaxiibkiisa
In ku cel-reincarnation ah, naf saaxiibkiisa, taas oo uu dhisay xiriir qoto dheer la kulmay wakhti kasta waa dabcan macquul sare oo sidoo kale ka jira dunida this. Waxaan ka qarxay aan la kulmay dad b...
Marka aad la kulanto saaxiibkiisa naf kasta oo kale oo soo jiidatay by nafta, waa marka aad dareemay Milanello ee midba midka kale. Waqtigaas waa faraqa u dhexeeya dadka qaar ka mid ah, dadka qaar la ...
saaxiibkiisa Soul, sababtoo ah waa waxa kasta oo kale waxaa soo jiitay by nafta, sidoo kale inta badan waa haddii kulmeen waa in aan is guursano iyo horumarinta sida ay tahay xidhiidh haddii ay tahay ...
Wehelkaaga Xaggee baad joogtaa? Sida loo helo iyo sida ay u baaraan
Wehelkaaga of qaddar, tusaale ahaan, sababtoo ah waxaa inta badan waa caadi ah, sida hiwaayadaha la mid yihiin, in aad marar badan maqli warkii kulanka si fudud haddii Demuke meel ku raaxaysan hiwaaya...
Tusaale ahaan, dadka lover hadda shukaansi doonayaan in ay ogaadaan in ama aan saaxiibkiisa naf of qaddar noqon lahaa badan. Dadka aan jeclahay hadda waxaan qabaa inaan sidoo kale doonayaan inay doona...
Waxaan qabaa waxaa la dareemay in "qof si xunna iman Ahaanshaha," "aan waxtar lahayn oo tani ma aha qofka"?sida, dadka jiritaanka Yorisoeru sababta nalastiko, waxaa laga yaabaa inaad naf saaxiibkiisa....